Global Voices teny Malagasy » Nandray Am-pifaliana ny Mpanjaka Saodiana ny Indoneziana Saingy Mampanahy ny Mpikatroka ny Herim-Panintonan’i Riyadh · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Marsa 2017 5:03 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Arabia Saodita, Indonezia, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Mpanjakan'i Arabia Saodita, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Sary: Flickr / Jim Mattis / Asan'ny governemantan'i Etazonia
Taorian'ny fiatoana 47 taona, nitsidika an'i Indonezia indray ny mpanjaka Saodiana. Nankasitrahan'ny  maro tao Indonezia, izay firenena maro an'isa Miozolomana indrindra manerantany ny fitsidihana, saingy naneho ny fahatezerany ny sasany noho ny fanjakana tsy niresaka momba ny manjò ireo Indoneziana mpifindra-monina miaritra fanitsakitsahana ao Arabia Saodita.
Tonga tao Indonezia tamin'ny 1 Marsa ny mpanjaka Salman ben Abdulaziz Al Saud izay tafiditra ao anatin'ny fitetezan-tany  ataony maharitra iray volana ao Azia, anisan'izany i Malezia, Brunéi Darussalam, Shina, Japana ary Maldives. Miaraka amin'ireo delegasiona miisa 1.500 ny mpanjaka, ahitana printsy 25 sy minisitra 10.
Ny fitsidihana farany nataon'ny mpitondra Saodiana tao Indonezia dia nandritra ny fitondran'i Faisal bin Abdulaziz Al Saud.
Noraisin'ny filoha Indoneziana Joko Widodo (Jokowi) ho mpiambina ny tanàna rmasina Islamika roa ao Lameka sy Medina ny mpanjaka Salman.
Mirehareha i Indonezia mandray ny fahatongavan'ny mpiambina ny Tanàna Masin'i Lameka sy Medina, Ny Mpanjaka Salman bin Abdulaziz al-Saud, eto Indonezia.
Nampiseho ny mpanjaka Saodiana tamin'ny lahatsary bilaogy ihany koa i Jokowi. Nanipika izy fa hitarika any amin'ny fifandraisana akaiky kokoa eo amin'i Indonezia sy Arabia Saodita ny fitsidihana manan-tantara.
Fiarovana ireo mpiasa Indoneziana ao Arabia Saodita
Nandritra ny fitsidihan'ny mpanjaka Saodiana, fifanarahana 11 momba ny fiarahamiasa ara-kolontsaina, varotra sy fampiasam-bola, siansa, ady amin'ny heloka bevava ary raharaha Islamika no nosoniavin’ i Indonezia sy Arabia Saodita.
Nanontany ny antony nahatonga ny governemanta Indoneziana tsy niresaka momba ny olana amin'ny fiarovana ny mpiasa Indoneziana any Arabia Saodita, na izany aza ireo vondrona sendikaly.
Nijanona nandefa mpiasa tany Arabia Saodita i Indonezia tamin'ny taona 2011, noho ny fampijalian'ireo mpampiasa ny mpifindra monina miasa ao amin'izy ireo. Na dia teo aza ny fandraràna, mbola nanohy niditra tao amin'izany fanjakana izany ihany ny Indoneziana mba hiasa ho mpanampy an-trano tsy ara-dalàna, mahatonga azy ireo vao maika mora iharan'ny fanararaotana isan-karazany.
Araka ny filazan'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Indoneziana ,Indoneziana maherin'ny 630.000 no miasa ao Afovoany Atsinanana, anisan'izany i Arabia Saodita. Ary mety hiakatra io tarehimarika io raha ampidirina ny isan'ireo mpiasa tsy manana taratasy sy lasibatry ny fanondranana tsy ara-dalàna
Nisy ny fihetsiketsehana milamina teo anoloan’ ny masoivoho Saodiana izay nokarakarain’ ireo mpikatroka nandritra ny fitsidihan’ ny mpanjaka Saodiana. Nitaky fiarovana ny zon'olombelona tsara kokoa ho an'ireo mpiasa Indoneziana any Arabia Saodita izy ireo satria mbola sokajian'ireo mpampiasa mpanararaotra sasany toy ny kaffallah (fananana) ny mpiasa an-trano.
Presiden Jokowi Dinilai Tak Peduli Perlindungan TKI https://t.co/q8dROf72IM  pic.twitter.com/G5H36qgOS8 
Tsy dia nifantoka tamin'ny fiarovana ireo mpiasa mpifindra monina Indoneziana ny filoha Jokowi.
Ho setrin'izany, nilaza ny fanjakana Indoneziana fa nandritra ny resadresaka teo amin'i Jokowi sy ny mpanjaka, noresahana ny olana momba ireo Indoneziana mpiasa mpifindramonina. Voalaza fa nanome toky an'i Jokowi ny mpanjaka Salman fa handray ireo mpiasa Indoneziana ho toy ny vahoakany manokana.
Tsy maintsy manaraka ny resak'i Salman sy Jokowi amin’ ny lafiny ara-teknika mikasika ny fiarovana ireo mpiasa mpifindra monina i Arabia Saodita sy Indonezia
Wahhabisma ao Indonesia
Noresahan’ ireo mpiserasera nandritra ny fitsidihan'ny mpanjaka Saodiana ihany koa ny fitomboan'ny mahery fihetsika ao Indonezia. Fantatra amin'ny fandeferany eo amin'ny ara-pivavahana i Indonezia amin'ny ankapobeny, na dia lasa mavitrika kokoa tao anatin'ny taona vitsivitsy aza ireo Miozolomana hiringiriny tamin'ny alalan'ny fanoheran'izy ireo ny governemanta ankehitriny, izay ampangain'izy ireo fa malemy tsy mahavita miaro ny Silamo. Nanao antso ihany koa izy ireo mba hametraka kalifà Islamika ao amin'ny faritra.
Nandritra ny kabariny  teo anoloan'ny loholona sy mpanao lalàna Indoneziana, nandrisika fiarahamiasa akaiky kokoa mba hiadiana amin'ny fampihorohoroana sy ny mahery fihetsika ny Mpanjaka Salman .
#RajaSalman  mengajak Dunia bersatu & bertekad memerangi ekstremisme & terorisme, itu sebabnya meng-Haji-kan keluarga dari Densus88 yg gugur
Miantso firaisankina sy fahavononana manerantany mba hiady amin'ny mahery fihetsika sy ny fampihorohoroana i #RajaSalman (Mpanjaka Salman), noho izany, handefa ireo fianakaviana ao amin'ny Densus88 rava (tafika manokana Indoneziana miady amin'ny fampirohoroana) any amin'ny Haj fivahiniana masina izy.
7. Oleh karenanya, segala bentuk radikalisme dan ekstremisme disebut @KingSalman  sangat penting untuk ditanggulangi #RajaSalman  pic.twitter.com/5yoMTwTjG9 
Noho izany, zava-dehibe ny miresaka momba ny radikalisma sy ny extremisma, araka ny nolazain'ny mpanjaka
Nanatontosa fivoriana  miaraka amin'ireo mpitarika ara-pivavahana ao Indonezia ihany koa ny mpanjaka sy ny manodidina azy.
Saudi belajar pluralisme dari Indonesia. Kita belajar Wahabisme dari Saudi. Impas. 😂 https://t.co/t1TOFFaRTh 
Nianatra ny fahamaroan-kevitra tao Indonezia ny Saodiana. Nianatra ny wahabisma tamin'ny Saodiana isika. Mitovy isika
Na dia teo aza ny fandraisana tsara nampandrosoana ny mpanjaka Saodiana, mbola miahiahy amin'ny fitomboan'ny Wahhabisma ao Indonezia ny sasany;
Ara-tantara, nitranga nandritra ny vanim-potoana fanjanahantany Holandey ny fahatongavan'ny Wahhabisma raha nandray fitaovam-piadiana hiadiana amin'ny governemanta mpanjanaka Holandey ireo mpitarika Miozolomana.
Saingy nahazo vahana ny fandikàna henjana ny Wahhabisme tamin'ny taompolo 1980 tamin'ny fampidirana ny sekolin'ny kolontsaina sy ny teny vatsian'ny Saodiana ara-bola. Ankehitiny, mitambatra ireo Miozolomanana mahalala oniny ao Indonezia mba hiadiana amin'ny fihanaky ny fivavahana Wahhabi sy ny Salafista tafahoatra.
Tsy ny Wahabi no endriky ny Islamo tianay (Indoneziana). Amin'izy io, toa tsy mifanaraka amin'ny maha-olombelona sy ny sivilizasiona taonjato faha-21 ny finoana Silamo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/17/96752/
 Indonesia bangga menyambut kedatangan Sang Penjaga Dua Kota Suci Makkah dan Madinah, Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud di Indonesia. Foto: Biro Pers Setpres: https://www.instagram.com/p/BRGbNlZgFAw/
 March 3, 2017: https://twitter.com/FSPMI_KSPI/status/837536063614693376
 March 2, 2017: https://twitter.com/andreasharsono/status/837449168285097984
 March 2, 2017: https://twitter.com/HansPSiagian/status/837145165261234176
 March 4, 2017: https://twitter.com/KSPgoid/status/837900302678269952
 March 4, 2017: https://twitter.com/idetopia/status/837911519069249536
 March 5, 2017: https://twitter.com/savicali/status/838325778085367809